Dhismo ku yaal Isgoyska Dabka oo gubanaya – STAR FM SOMALIA
Wararka inaga soo gaaraya Isgoyska Dabka ee Magaalada Muqdisho, ayaa sheegaya Dabaq weyn oo ah goob ganacsi inuu halkaasi ku gubanaayo.
Lama oga rasmi ahaan dabkaan wuxuu ka dhashay, balse dadka waxa ay sheegayaan markii uu qaraxa dhacay waxyaabo qarxo inay ku soo dhaceen dabaqa dushiisa, taasi oo dabka uu ka dashay.
Warar kale ayaa sheegaya dabka inuu ka dhashay Koronto soo go’day markii uu qaraxa dhacay, waxaana xaga sare ee dabaqa ka baxaya Uuro iyo qiiq fara badan.
Gaadiidka Dabdamiska Gobolka Banaadir ayaa ku baxay goobta gubanaysa, waxayna isku dayayaan inay baqtiiyaan dabka xoogan ee dhismahaasi ka socda.
Dabaqa gubanaayo ayaa wuxuu ku yaalla wadada ka baxda Isgoyska Dabka ee u dhaqaaqda dhanka Buundada.
Ciidamo fara badan ayaa la soo dhoobay Nawaaxiga Isgoyska Dabka, kuwaasi oo wadada xiray, iyadoo la maqlaayo dhawaqa rasaas dhaceysa.
Wararkii Ugu Dambeeyay Weerarkii Hotel Dayah oo lasoo afjaray iyo Qasaaro badan oo ka dhashay (Daawo Sawirada)